Indlu encinci, yabucala enegumbi layo lokuhlambela. - I-Airbnb
Indlu encinci, yabucala enegumbi layo lokuhlambela.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarianella
Ifulethi elincinci elipholileyo (malunga ne-18 sqm) kwigumbi elingaphantsi elinemini kunye negumbi lokuhlambela labucala. Ukufikelela kwigumbi / kwigumbi lokuhlambela kuzimele.
Indawo: Ibekwe ngokuthe ngqo ngaphantsi kweNqaba yeSolitude, ngasekunene kwehlathi, ibala lokudlala, ifama nangaphantsi komhlaba (U6) yokumisa (malunga nemizuzu emi-5 ngeenyawo). Malunga nemizuzu engama-25 unokuthatha indawo engaphantsi komhlaba eStuttgart kwisikhululo esikhulu / eSchlossplatz. Ifikeleleka ngokulula ngaphandle kwemoto.
Nceda usazise malunga nexesha lokufika kwakho ubuncinane kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokufika. Kungenjalo, ukungena okubhetyebhetye akuqinisekiswanga.
IGerlingen yidolophu ekumntla-ntshona weStuttgart kwaye malunga neekhilomitha ezilishumi ukusuka kwidolophu yesithili saseLudwigsburg eBaden-Württemberg kwisithili saseLudwigsburg. Kummandla weStuttgart (ukuya kuthi ga ngo-1992 ummandla we-Middle Neckar) kunye nommandla we-European metropolitan yaseStuttgart.
Umbuki zindwendwe ngu- Marianella
Sihlala endlini kwaye ke sihlala sikhona.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Gerlingen